Dowadda Burundi oo dhaqaale abuur ku heysata ciidammadeeda Soomaaliya kuna hanjabtay hadii…. – Walaal24 Newss
February 21, 2019	2	By walaal24
Shan dal oo Afrikaan ayay ciidammo ka joogaan Soomaaliya. Inkastoo ay jirto walaac laga muujinayo in Soomaaliya ay weli ka fogtahay inay cagaheeda ku is taagto, haddana heshiiska Qaramada Midoobay ayaa dhigaya in ciidammada nabad ilaalinta ee tiradoodu ay ka badan tahay labaatan kun ay tahay inay isaga baxaan dalka isla markaana ay ammaanka ku wareejiyaan ciidamadda Soomaaliya. Tifaftiraha BBC ee Afrika, Will Ross, ayaa ku soo warramaya in qorshaha bixitaanka ciidammada uu yahay mid lagu muransan yahay.
Arrimaha ay isku haystaan waxaa ugu weyn dhaqaalaha. Bil waliba in ka badan labaatan kun oo ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee la dagaallama kooxda Al-shabaab, ayaa qofkiiba wuxuu qaataa lacag ka badan kun doollar.
Kooxda Atletico Madrid oo ka adkaatay kooxda Juventus lugta koowaad ee Champions League
Ciidanka ammaanka oo Degmada Dharkeynleey kusoo bandhigay Burcad Shacabka dhac u geysan jirtay iyo Hubkii ay wateen
Ra’iisal wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo gaary magaalada Nairobi ee Dalka Kenya
Gudoomiye ku xigeenka kowaad Golaha Aqalka sare oo gaaray magaalada Garoowe ee Puntaland